WestJet ikozvino inoda yakakwana yeCCVID-19 yekudzivirira yevashandi vese
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » WestJet ikozvino inoda yakakwana yeCCVID-19 yekudzivirira yevashandi vese
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kanada Breaking News • Health News • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Vashandi vanokundikana kupupura nhomba yavo nemusi waGunyana 24 kana kuzadzikiswa zvizere nenjodzi panosvika Gumiguru 30, 2021, vachatarisana nezororo risingabhadharwe kana kumiswa kwebasa.
WestJet inozivisa inofanirwa kupora kune vese vashandi.
Mamiriro akazara ekudzivirira vachatodawo kune vese vashandi venguva yemberi.
Mutemo mutsva wekudzivirira vachatanga kutanga Gumiguru 30, 2021.
IWestJet Group nhasi yazivisa kuti kutanga kwaGumiguru 30, 2021, vese vashandi veWestJet Group vachazodiwa kuti vabaiwe jekiseni rakazara kupikisa COVID-19. Uye zvakare, chinzvimbo chakazara chekudzivirira chichava chinhu chinodiwa chevashandi vese mune ramangwana vakapihwa basa neWestJet Boka.
"Kuchengetedza hutano nekuchengetedza kwevaenzi vedu nevashandi kunoramba kuri kwedu kwekutanga uye majekiseni ndiyo nzira yedu yekudzivirira," akadaro Mark Porter, WestJet Executive Mutevedzeri weMutungamiri weVanhu. "Ndege yave imwe yemabhizimusi akanyanya kurohwa uye tinotenda kuti vashandi vese veWestJet Group vabaiwe chinhu chakakodzera kuita uye nekuvimbisa nzvimbo dzakachengeteka dzekufamba nedzemabasa kune wese munhu muWestJet."
IWestJet Group ichaongorora nekugarisa avo vashandi vasingakwanise kubaiwa jekiseni vachipesana neCOVID-19 kungave kuburikidza nekurapa kana kumwe kuregererwa. Vashandi vanokundikana kupupura chinzvimbo chavo chekudzivirira panosvika Gunyana 24 kana kuwana chinzvimbo chakazara chekudzivirira panosvika Gumiguru 30, 2021, vachatarisana nezororo risingabhadharwe kana kumiswa kwebasa. Sechikamu chemvumo yayo yekudzivirira, iyo ndege haizopa kuyedzwa seimwe nzira yekudzivirira.
Akaenderera mberi Porter, "WestJet Group inoramba yakazvipira kuvaka zvakare yakasimba kuona bhizimusi rekukwikwidza nendege muCanada. "Zvinoda kuti vashandi vese vabaiwe jekiseni re COVID-19 kwakakosha pakutangazve kufamba kwakachengeteka muCanada."
Kubva pakatanga denda iro WestJet Boka reMakambani rakavaka yakagadzika masitepisi edziviriro matanho kuona kuti maCanada vanogona kuramba vachifamba zvakachengeteka uye zvine mutsindo kuburikidza nendege yeKuchengetedzwa Pamusoro Pose Vimbiso. Munguva ino, WestJet yakachengetedza chinzvimbo chayo seimwe yepamusoro-gumi pa-nguva nendege muNorth America sekudanwa kwayakaitwa. Cirium.
John Sneddon anoti:
Svondo 9, 2021 pa 05: 11
Iwe uri yakaipa kambani iwe, ndinovimba yako fascistic modhi inokundikana